PIED အကြောင်း - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်အကြောင်းဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ကပြောကြားသည်
ညစ်ညမ်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုသောကျွမ်းကျင်သူများ - သက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများနှင့်အတူ
တစ်ဦးကဆီးလမ်းကြောင်း PIED အကြောင်းထဲကတိုက်တွန်း
ငါ (40 အောက်မှာ) ငါ၏အငယ်ရွယ်သောလူနာအများအပြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏တိုင်ကြားချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ငါ့ဆေးခန်းကိုတင်ပြမယ်လို့သောအခါငါနေ့ကိုမွငျခငျြထင်ခဲ့ပါဘူး။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်လေ့ကျင့်ဆီးရောဂါပါရဂူအဖြစ်ငါအသက်ကြီးအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) နဲ့အလွန်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်၏။ ဒါကပုံမှန် ED ထိုကဲ့သို့သောသွေးတိုး, သွေးကြောသို့မဟုတ်အာရုံကြောရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်တခြားပြင်ပရောဂါဗေဒအဖြစ်အော်ဂဲနစ် etiologies နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သို့သော်ကျွန်မမဆိုရောဂါဗေဒ၏မရှိခြင်းနှင့်အတူ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက် 40 ၏နှစ်အောက်ယောက်ျားတစ်ဦးကိုအလွန်တရာမြင့်မားတဲ့အရေအတွက်ကကုသနေပါတယ်။
ယခင် 2002 Meta-analysis သည်သာ 40% ဖြစ်2အောက်မှာယောက်ျားတစ်ဦး ED ပျံ့နှံ့အကြံပြုသည်။
အဆိုပါတင်ပြချက်များအတော်လေးသိသိသာသာခြားနားသည်။ သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက် (porn နှင့်အတူစိုက်ထူရှိသည်ဖို့တတ်နိုင်) နဲ့စိုက်ထူရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်အတူပစ္စုပ္ပန်တချို့ကလုလင်တို့သည်။ သည်အခြားယောက်ျားလိင်ဆက်ဆံမှု (သာမိမိတို့၏လက်နှင့်အတူ orgasm နိုင်သည်) စဉ်အတွင်းအော်ဂဇင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တချို့ကအနိမ့် of sex drive လိင်စိတ်တိုင်ကြား။ ငါ၏အလူနာတချို့ကသူတို့ရဲ့လိင်သဘာမေးမြန်းမျက်ရည်၌ရှိကြ၏။ ငါ့လူနာအများအပြားအခြေခံကနေစှာကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ အခြားအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်အကြောင်းကိုတိုင်ကြားနေချိန်မှာလည်းလူနာတဦးတည်းလက်အပေါ်ပြင်းထန်စွာနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်၏ညည်းညူ။ လိင်များအတွက်လုံလောက်သောတစ်ခုစိုက်ထူရှိသည်ဖို့တတ်နိုင်သူကပိုကံကောင်းယောက်ျားတွေထဲကတချို့ဟာသူတို့ရဲ့လိင်တံထုံခံစားရကြောင်းတိုင်ကြား။ သူတို့ဟာဒီထက် penile sensitivity ကိုနှင့်လိင်အပျော်အပါးအတွက်အကြီးအကျယ်လျှော့ချရေးကြုံနေရနေကြသည်။ အများအပြားကလူနာတွေကိုသူတို့မိတ်ဖက်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမရငျးနှီးခံစားရကြောင်းပြောကြသည်။ သူတို့ porn မှာရှာနေသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးသို့မဟုတ်အချို့သောအခြားဇာတ်လမ်းအကြောင်းကိုကူးယဉျနေကြသည်မဟုတ်လျှင်ထို့ပြင်သူတို့အော်ဂဇင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကအနည်းငယ်လူနာတောင်မှသတ်သေစဉ်းစားပါပြီ။ တစ်မိသားစုကိုစတင်ရန်နှင့်ပုံမှန်လိင်မဆိုကျန်းမာနုပျိုယောက်ျားသည်ခန့်မှန်းထားသည်ရှိသည်ဖို့တတ်နိုင်ဖြစ်ခြင်း။ ဒီမျှော်လင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါအခါ, အလေးအနက်ကျန်းမာရေးအကျိုးဆက်များတရပ်ပေါ်ပေါက်လာ။ ငါဆေးကျောင်းကာလအတွင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏နေထိုင်စဉ်အတွင်းထိုအကိစ္စများမဆို၏မကြားဘူးအဘို့ဤအတင်ပြချက်များငါ့ကိုတျရှုပျထှေး။
ဒီထူးခြားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအလင်းပေးဖို့မစ်ရှင်ကိုကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်။ ရှက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဘာမှမသိတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်ကောင်းတဲ့သုတေသနကိုတွေ့ရတော့ကျွန်မအံ့သြသွားတယ်။ လူအများစုကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်တစ်ခုခုသိချင်တဲ့အတိုင်းငါလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ“ Dr. ဂူဂဲလ်။ " ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည် ED ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းများဖြစ်သောစိုးရိမ်စိတ်သို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါအကြောင်းဖော်ပြသည်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေကြာမြင့်စွာကတည်းကရှိနေတာကြောင့်ငါသံသယဝင်ခဲ့တယ်။ မေးခွန်းမှာ“ ကျန်းမာသန်စွမ်းသောလူငယ်များတွင်အဘယ်ကြောင့်တိုးပွားလာနေသော ED လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုရှိသနည်း။ ဒါကြောင့်ငါကပိုပြီးနက်ရှိုင်းစွာတူးပြီးဝက်ဘ်ဆိုက် yourbrainonporn.com ကိုတွေ့တယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအကြားဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိပြီးနောက်ငါစွဲလမ်းခဲ့သည် ငါပထမတော့သံသယဖြစ်ခဲ့သည်။ porn နှစ်ပေါင်းများစွာပတ်ပတ်လည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အကြံပြုထားသောစာပေများစွာကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်သိသာသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောဆက်သွယ်မှုကိုစတင်သဘောပေါက်လာသည်။ အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်မှာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်အင်တာနက်ပေါ်၌“ ညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များ” ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်ကယောက်ျားများအားညစ်ညမ်းသောအရှိန်နှင့်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းနှင့်အဆုံးမဲ့လက်လှမ်းမီမှုနှင့်အသစ်အဆန်းများကိုကြည့်ရှုနိုင်စေသည်။ ကျွန်တော်ကိုရှက်ကြောက်မိတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရောဂါဗေဒပညာရှင်တွေဟာလူနာတွေကိုသူတို့ရဲ့ ED ကိုကူညီဖို့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုတစ်ခါတစ်ရံအကြံပြုချင်လို့ပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအနေဖြင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြproblemနာနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမှမသိရှိရသေးပါ။
ဒီတုန်လှုပ်ဖွယ်လမ်းကြောင်းသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိသိသာသာသုတေသနလုပ်ငန်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သုတေသနကောင်း! ငါ၌သံသယဝင်ပြီးယောက်ျား၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (porn အမျိုးသမီးလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု) တွင် porn ၏အခန်းကဏ္roleကိုသံသယဝင်သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များစွာရှိသည်။ ငါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတရားဝင်သက်သေအထောက်အထားများကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ စာဖတ်သူတွေအားလုံးကိုဒီအဓိကဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ပြီးဖတ်ပါ။ သိပ္ပံနည်းကျသံသယ ၀ င်သူများစွာသည်သုတေသနအလုံအလောက်မရှိဟုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ သုတေသနနှင့်သိသာထင်ရှားသည့်အချိန်ကာလ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသိသိသာသာနောက်ကျအချိန်ရှိသည်။ ဤမလွှဲမရှောင်သာနောက်ကျခြင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်မကြာသေးမီကသမိုင်းတွင်ကောင်းသောဥပမာနှစ်ခုသည်ဆေးရွက်ကြီးနှင့်သကြားကိုပျက်စီးစေခဲ့သည်။ “ လုံလောက်တဲ့” သက်သေအထောက်အထားမရှိရင်တောင်ဒီဟာကိုလုပ်ရမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမှုနှင့်လိင်မှုကိစ္စကိုလောင်းကစားရန်ဆန္ဒရှိပါသလား။ ငါလောင်းကစားကိုယူရန်ဆန္ဒရှိမဟုတ်ကြောင်းငါသိ၏။
ဒေါက်တာ Tarek Pacha DO, ဆီးလမ်းကြောင်း, Urology ၏မီချီဂန်အင်စတီကျု
Prins, ဂျေ .; Blanker, MH; Bohnen, Am, သောမတ်စ် S ကို .; Bosch ရဲ့, JLHR erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့: လူဦးရေ-based studes ၏တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ int ။ ဂျေသင်ျခြို Res 2002, 14, 422-432
ပေါ်တို, R. အထီး Masturbatiion အလေ့အထများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် Sexologies; 16 သြဂုတ်လ 2016 ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ပန်းခြံ, B. et al. အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ;5သြဂုတ်လ 2016 ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Wéry, အေနှင့် Billieux, ဂျေ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ: ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်ပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာအသုံးပြုမှုပုံစံများတစ်ခုကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ 2016, 56, 257-66 ။
မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောစစ်တမ်းတစ်ခုအရအသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၃ နှစ်ကြားကလေး ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းသည်၎င်းတို့သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုထိတွေ့ဖူးသည်ဟုဆိုသည်။ တချို့ကသူတို့ကပြပွဲလုပ်တယ်ပြောတယ်။ t.co/bRQ4nVVjdi